मुस्लिमहरू येशूमा विश्वास गर्छन् तर किन क्रिसमस मनाउँदैनन्? – " कञ्चनजंगा News "
मुस्लिमहरू येशूमा विश्वास गर्छन् तर किन क्रिसमस मनाउँदैनन्?
No Comments on मुस्लिमहरू येशूमा विश्वास गर्छन् तर किन क्रिसमस मनाउँदैनन्?
एजेन्सी- ‘तपाईंले टर्कीमा क्रिसमस कसरी मनाउनुभयो?’ म बेलायत आएको २१ बर्ष भयो, तर हरेक चोटि क्रिसमसको बेला यो प्रश्न मेरो सामने आयो। यसको जवाफमा, म मात्र भन्न सक्छु कि टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश हो, त्यसैले डिसेम्बर २५ को मिति पनि अन्य सामान्य मिति जस्तै हो।
एक मुसलमान कुरानमा येशूको उल्लेखबारे इशारा गर्दै
क्रिसमस संसारको ठूलो जनसंख्याकाे लागि साझा दिन हो। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन, पश्चिमाहरु विश्वका धेरै मानिसहरु क्रिसमस जताततै मनाइएको छ भन्ने महसुस गर्छन्। तर, क्रिसमस ईसाई धर्मका पैगम्बर येशू ख्रीष्टको जन्माेत्सव हो र यो हिन्दू , यहूदी र मुस्लिमहरुको पात्राेको पवित्र मिति होइन।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मुस्लिम समाजमा त्यस्ता धेरै परिवारहरू छन्, जसले ती चाडपर्वहरुमा उनीहरुका मुद्दाहरू सुल्झाउँछन्। त्याे ईद हो क्रिसमसको होइन।
ईद र क्रिसमसबीच भिन्नता छ। र यो भिन्नता बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। एकै समयमा इसाई र इस्लाम बीचको सम्बन्ध बुझ्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुराले तपाईंलाई चकित तुल्याउन सक्छ। इस्लाम येशूको जन्म मनाउन सक्दैन। तर, येशूको सम्मान गर्दछ।
मुस्लिमहरुको नजरमा येशू ख्रीष्ट इसाईहरूका भविष्यवक्ता हुन् र यो विश्वास उनीहरूको धर्मको अभिन्न अंग हो। कुरान येशूलाई पैगम्बर मुहम्मदभन्दा पनि पहिले आएकाे मान्दछ। वास्तवमा येशूलाई अरबी भाषामा ख्रीष्ट भनिन्छ जो पवित्र पुस्तक कुरानमा उल्लेख छ।
इस्लामको पवित्र पुस्तकमा केवल एउटी महिलाको उल्लेख गरिएको छ। उनी भर्जिन मरियम हुन्। जसलाई अरबी भाषामा मरियम पनि भनिन्छ। कुरानमा मरियमकाे नाममा एक अध्याय छ। जसमा येशू ख्रीष्टको जन्मलाई संकेत गरिएकाे छ। तर, येशूको जन्मको बारेमा जुन कथा छ, त्यहाँ न त जोसेफ, न स्वर्गदूतहरु न नाद (जनावरलाई खुवाउन प्रयोग गरिने चरित्र) छन्।
मरियमले एक्लै मरुभूमिमा येशूलाई जन्म दिइन् र सुक्खा खजूरको रुखको छायाँमा शरण लिएकाे उल्लेख छ। त्यसपछि एउटा चमत्कार भयो। रुखको तल खानका लागि खजुर आयाे। अनि पानीको मूल पनि फुट्याे।
एकल महिलासँग बच्चा हुनुका बारेमा प्रश्न खडा हुन सक्छ। तर, नवजात येशू परमेश्वरको सन्देशवाहक जस्तो बोल्न थाले। यस चमत्कारबाट एउटी आमा निर्दोष प्रमाणित भइन्। यो कथा पूर्वाग्रहहरूमाथि विजयको कथा हो।
जब मुसलमानहरुले येशूको बारेमा भन्छन्, ‘उनलाई शान्ति मिलाेस्’ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। उनी कयामत हुँदा फर्कने मुसलमानहरु विश्वास गर्छन्।
मुस्लिम साहित्यमा कुरान भन्दा पहिले येशूको प्रशंसा गरिएको छ। सूफी दर्शन अल गजाली उनलाई ‘आत्माकाे पैगम्बर’ बाेलाउँछन्। उही समयमा, इब्न अरबीले उनीहरूलाई ‘सन्तहरु’ को रूपमा वर्णन गरे।
मुस्लिम समाजमा यशू केटाहरूको नाम र मरियम केटीहरुकाे नाम छन्। जुन येशू र मरियमसँग सम्बन्धित छ। के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि ईसाईमतमा विश्वास गर्ने परिवारले आफ्नो छाेराकाे नाम मुहम्मद नाम राख्न सक्छन्?
इस्लाम धर्म येशूसँग परिचित छ किनकि सातौं शताब्दीमा इस्लाम धर्मको उदयको बेला मध्यपूर्वमा ईसाई धर्मको प्रचलन रहेको थियो।
यद्यपि, बाइबलमा मुहम्मदको उल्लेख गरिएको छैन र यसको कारणहरू स्पष्ट छन्। आउने शताब्दीहरुमा इस्लामले येशू ख्रीष्टको उपासना गर्न सक्दछ। तर, यो कुरा स्पष्ट छ कि चर्चले यसबारे उदारता देखाएकाे छैन।
इटालियन कलाकार जियोवन्नी दा मोडेना एक कवि दन्तेको प्रख्यात रचना देवीन कमेडीबाट प्रेरित थिए। जसमा दन्तेले मुहम्मदलाई नरकमा दिइरहेकाे पीडाकाे बारेमा वर्णन गरेका थिए।
यो पुस्तकले १९औं शताब्दीमा धेरै कलाकारहरुलाई प्रेरित गरेकाे थियाे। जसमा नरकमा मुहम्मदले यातना पाएका रचनाहरु समावेश थिए। यी कृतिहरुमा विलियम ब्ल्याकका कृति पनि समावेश थिए।
बेल्जियमको चर्चमा १७औं शताब्दीको मूर्तिकलामा इस्लाम पैगम्बरलाई स्वर्गदूतको खुट्टामुनि राखिएको चित्रण गरिएको छ। तर, चर्च याे विषयलाई समर्थन गर्दैन। लामो समय बितिसक्यो तर हाम्रो युगमा भिन्न प्रकारको तनाव, पूर्वाग्रह र अतिवादी हिंसा छ।
वर्ष २००२ मा इस्लामी चरमपन्थीले बोलोग्ना चर्चका मूर्तिहरू नष्ट गरेकाको आशङ्का गरिएकाे थियो। त्यसबेलादेखि युरोपका धेरै मुस्लिम देशहरुमा इस्लामको नाममा सामूहिक हत्याहरू भए। जसको कारण समाजमा फाटो आयो।
मुस्लिम समाजदेखि इसाई समाजसम्म मुस्लिम येशू ख्रीष्टको महत्त्व खोज्नु र बुझ्नु अहिले महत्त्वपूर्ण छ। यदि संसारका सबै धर्महरुलाई जोड्ने कुरा के हो भनेर हामी बुझ्न सक्षम भयाैं भने यसले समाजका दरारहरु भर्न सहयोग गर्नेछ।
← भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि छ त्यतिनै रोचक → विराटनगरको रानी भन्सार नाका ठप्प, वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन व्यवसायीको आग्रह